कसले हानेको थियो गौचनलाई गोली ? कार्यदल र सीआईबीको अनुसन्धान बाझियो - Everest Dainik - News from Nepal
कसले हानेको थियो गौचनलाई गोली ? कार्यदल र सीआईबीको अनुसन्धान बाझियो
काठमाडौं, पुस १२ । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनलाई गोली हानी हत्या गरिएको घटनाको विषयमा छानविन गर्न गठित कार्यदल र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अनुसन्धान रिपोर्ट बाझिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस मदिराको लतले समातिए शरदकुमार गौचन हत्यामा संलग्न हतियार कारोबारी
याे पनि पढ्नुस गौचनकाे अन्त्येष्टि आज, शहीद घोषण गर्ने तयारी
ट्याग्स: sarad kumar gauchan